သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အပ်ချုပ်ပညာ ခလုတ်များ လေး -> ကူးသန်းရောင်းအပ်ချုပ်စ​​က်အပ်နဖားကို
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan ကူးသန်းရောင်းအပ်ချုပ်စ​​က်အပ်နဖားကို ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
Point: STU / Kn / BP ရေနံကုမ္ပဏီက / Suk / spî
size: ~ 19/120 09/65
Equivalent Systems: 175X1, 175X5, 29S, 1985
ဒါဟာစက်အသုံးပြုခြင်းပူးတွဲပြီးခလုတ်ကိုအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ ဒါဟာအပ်ချုပ်ခလုတ်များအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်။ ဒါဟာမိုးသည်းထန်စွာတုံးပတ်ပတ်လည်ပွိုင့်နှင့်အတူပါပဲ။ Equivalent စနစ်များ: 175X1, 175X5, 29S, 1985 ကအပ်ချုပ်စ​​က်နှင့်ကိုက်ညီ: Juki ကို MB-373 Button ကိုချုပ်စ​​က်။
Equivalent Systems: 175X7, 29L, SY8728, 2091
ဒါဟာစက်ပူးတွဲပြီးခလုတ်ကိုအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ အပ်ချုပ်ပညာထိုကဲ့သို့သောသိုးမွှေးထိုးကုန်ပစ္စည်းများအဖြစ်အလင်းသည့်ပစ္စည်းများအပေါ်ခလုတ်, ရှပ်အင်္ကျီ, အတွင်းခံ, နှင့်ကလေးများရဲ့အဝတ်အစားတွေများအတွက်သင့်လျော် Size ကို # to189#, ။ Size ကို 19 # # 20: ထိုကဲ့သို့သော raincoat, သူတပါးရဲ့ဝတ်စုံ, အမျိုးသမီးရဲ့ဝတ်စုံ, တရုတ်အင်္ကျီကိုလည်း လုပ်. ဝတ်စုံအပေါ်ခလုတ်ချုပ်ရသောအဖြစ်အထူဝါဂွမ်းချည်သို့မဟုတ်ဓာတုဖိုင်ဘာမျှင်နှင့်အတူစက်ချုပ်ခလုတ်, များအတွက်သင့်လျော်။ Equivalent စနစ်များ: 175X7, 29L, SY8728, 2091 ။
Equivalent Systems: 175X9, 29-LSS, 175X7KK, 1987; 2091KK
အဆိုပါဝိသေသမိုးသည်းထန်စွာတုံးပတ်ပတ်လည်မှတ်နှင့်အတို Shanks ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစက်အသုံးပြုခြင်းပူးတွဲပြီးခလုတ်ကိုအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ button ကိုတိုတို Bing pintle သီချုပ်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ Equivalent စနစ်များ: 175X9, 29-LSS, 175X7KK, 1987 ခုနှစ်, 2091KK ။